[Monday, December 10th, 12] :: Guddiga doorashooyinka oo sheegay inay Natiijadii rabshadda dhalisay ee Hargeysa u gudbiyeen Maxkamadda gobolka
Hargeysa(RH):- Guddiga doorashooyinka Somaliland, ayaa sheegay inay natiijadii doorashada golaha deegaanka ee degmada Hargeysa u gudbiyeen Maxkamadda gobolka Hargeysa si ay uga garnaqdo muranka ka taagan natiijada, ka dib markii ay Ururrada iyo Xisbiyada siyaasadda ee doorashada ku tartamay ku heshiin waayeen in codadka Hargeysa dib loo tiriyo.
Guddoomiyaha Guddiga doorahsooyinka Somaliland Ciise Yuusuf Maxamed (Ciise-Xamari), ayaa War-saxaafadeed uu galabta soo saaray sidaa ku sheegay, waxaanu qoraalka war-saxaafadeedkaasi u dhignaa sidan:-“Guddida doorashooyinku wuxuu dadweynaha Somaliland ogaysiinayaa in doorashadii Golaha deegaanka ee ka qabsoontay Somaliland 28-kii November, ay u dhacday si waafaqsan sharciga doorashooyinka Golaha deegaanka, iyagoo ay goob-joogna ka ahaayeen Wakiillada Xisbiyada iyo goob-joogeyaal caalami ah iyo kuwo gudaha ah.
Komishanka Doorashooyinka qaranku wuxuu maanta oo taariikhdu tahay 10/12/2012 go’aansaday in loo gudbiyo natiijaddii doorashadda ee degmadda Hargeysa maxkamadda gobolka Maroodi-jeex, markii uu Komishanku dib u eegis ku sameeyay natiijadii degmadda, isla markaana hufid ku sameeyay xogta goobaha codbixineed ee faro-weyne oo ah degmo doorasho oo ka tirsan caasimadda Hargeysa.
Ka dib markii Xisbiyadda iyo Ururrada siyaasaddu ay ku heshiin waayeen dib u eegista komishanku sameeyay, waxa uu ku saleeyay natiijadda goobaha ee ay isla saxeexeen hawl wadeenadda Komishanka ee heer degmo iyo wakiiladda xisbiyadda iyo ururadda siyaasadda. Maxkamadda Gobolka Maroodi-jeex ayaa ka garnaqi doonta wixii cabasho ah ee ka soo baxa xisbiyadda, ururadda iyo Murashaxiinta.
Guddigu waxay kula tallinayaan axsaabta, murashaxiinta iyo dadweynaha Somaliland in Guulihii laga soo hooyay doorashooyinkii Goleyaasha deegaanka ee ay ka marag kaceen goob joogeyaashii caalamiga ahaa iyo kuwii gudaha inaan lagu dhaawicin khilaaf aan loo marin jidkii sharciga ahaa. Guddiga doorashooyinku waxuu mar labaad ku boorrinayaa dadweynaha in nabadda qaaliga ah ee Somaliland ku caano-maashay, sumcadda weyn-na ay adduunka kaga yeelatay la dhawro.”
Sabtidii todobaadkan ayay Guddiga doorashooyinku shaaciyeen inay dib u tirinayaan codkii doorashadda degmada Hargeysa, ka dib markii ay magaaladda Hargeysa ay ka dhaceen bannaan-baxyo loogaga soo horjeeday natiijada degmada Hargeysa ka soo baxday habeennimadii Khamiistii ee Jimcuhu soo galayey, taasoo sababtay dhimasho iyo dhaawac, ka dib markii Boolisku rasaas ku fureen dadweyne bannaan-baxayey oo ka cadhooday natiijada degmada Hargeysa.
Si kastaba ha noqotee, waxay dadka arrimaha doorashooyinka oddorosaa tailmaamayaan in go’aanka Guddiga doorashooyinka Somaliland maanta gaadheen uu yahay mid aan wax muuqda soo kordhin Karin, isla markaana aan qancin Karin musharrixiinta iyo ururrada siyaasadda ee ku doodaya in doorashada lagaga shubtay, taasoo sii kordhin karta xiisadda ka aloosnayd natiijada doorashada ee deegaanno badan oo dalka ka mid ah, gaar ahaan Caasimadda Hargeysa.